free music barnaamijyadooda geeyo
Qaybta 1.Spotify Music
Qaybta 2.Pandora Radio
Qaybta 4.Slacker Radio
Qaybta 7.Blinkbox Music
Pro Qaybta 10.TuneIn Radio
Download music xor ka ah goobaha la daadan TunesGo
Spotify waa mid ka mid ah barnaamijyadooda hogaanka u geeyo music, waxa aad bixisaa helitaanka aan xad lahayn oo xad geeyo si kala duwan oo maqal ah kuwan raadkaygay, qaybaha, playlists, albums iyo fanaaniinta. Iyadoo ay tahay mot lacag la'aan ah, qaababka hubno tegaya inuu idin badbaadiyo badan. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faallo ka users Spotify;
Si fudud u cajiib ah - helitaanka dunida ka mid ah music adeegga aad farta tipsThe premium waa riyo lover music ee ka soo trueThis waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Chine radio internet ee aan abid loo isticmaalo. Jeclaada app this mid ka mid ah music ugu fiican Apps baxay there.Just rabto waxaa jiray qashanka aan xad lahayn oo aan Times ah.
Awooda doorashada Music
Ku dar-free music
Dhegayso music maktabadda offline
Spotify Music waa la jaan qaada iPhone iyo iPad. Its rating waa 4.4 soo jeediyay in ay kaalinta mid ka mid ah codsiyada ugu sareysa ee ay category.
Faa'iidooyinka la isticmaalayo app waxaa ka mid ah awoodda ay leedahay in lagaaga caawiyo in aad ogaado music cusub, dhagaysto heesaha offline iyo madal add la'aanta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa ay qiimo dhimis ah.
Waxaad kala soo bixi kartaa app ka link halkan; https://itunes.apple.com/us/app/spotify-music/id324684580?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya Spotify
Codsiga Download ka link kor ku bixiyo oo ku xidh in qalab aad. Burcad codsiga, On screen guriga, dooran playlist aad rabto iyo si ay u bilaabaan hoorto music ka jaftaa ku yaal.
Pandora waa mid ka mid ah barnaamijyadooda geeyo music caanka ah ee Mareykanka, Australia iyo New Zealand. Waa weyn u personalizing music aad jeceshihiin. Waxaa tusaale ka ah comments ka users app ee waa sida soo socota; Sidaasi darteed waxaan qabaa tani waa radio app labaad ee ugu fiican soo baxay adeeg radio online thereBest inkastoo commercials iyo infomercials
MiniTool Barzakh Recovery
Mid ka mid ah idaacadaha ugu wanaagsan ee qofka aan waligay
Audio tayo sare
Hargahood oo Custom
Codsiga waa la jaan qaada iPhone iyo iPad. Its rating waa 4.4 soo jeediyay in ay kaalinta sida mid ka mid ah codsiga ugu sareeya ee ay category.
Faa'iidooyinka isticmaalaya codsiga tanuna waa lacag la'aan ah, saldhigyada ay shakhsi radio iyo playlists. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay leedahay in app-gadashada.
Waxaad codsiga halkan kala soo bixi kartaa; https://itunes.apple.com/us/app/pandora-radio/id284035177?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya Pandora
Download codsiga ka link ka bixiyo, soo dajiyo iyo abuurtaan it.Open aad accountSelect free playlist ama abuuro kuu gaar ah si ay u bilaabaan riyaaqayaa music ah.
iHeartRadio ayaa u sareysa sababtoo ah halka ay fududahay in la isticmaalo user interface, waxaa lagu amaanay by CNET sida "ugu fiican app radio geeyo". In aad markhaati furtid, halkan ku arki tilmaamo user;
Waxaan jeclahay badan aad dhegaysan kartaa idaacadaha dhabta ah oo dhan ka dalka Tani waa app radio ugu fiican online ee aan abid loo isticmaalo. Waxaa jira isku dhaf ah oo weyn oo ku saabsan saldhigyada caadadii.
Taageero gaari Apple CarPlay-qalabeysan
Music caadadii Commercial-free
Qulquli on your TV la Google Chromecast
Codsiga waa la jaan qaada iPhone iyo iPad. Waxaa lagu qiimeeyaa 3.9 soo jeediyay in ay kaalinta wax yar ka sarreeya dhexdhexaadnimada marka loo eego codsiyada kale ee la mid ah.
Faa'iidooyinka ka mid ah awood u leeyahay inuu abuuro playlists caado iyo in uu leeyahay xayeysiis lahayn. Si kastaba ha ahaatee, aad iyocadhadii wadaagaan music la saaxiibo on shabakadaha bulshada.
Waxaad codsiga halkan kala soo bixi kartaa, https://itunes.apple.com/us/app/iheartradio-stream-best-music/id290638154?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya iHeartRadio
Download codsiga ka link la siiyay, rakibi oo abuurtaan. On screen guriga, waxaad dooran kartaa xarun raadiye oo wax u ciyaaro music frpm iyo ka badan si, waxaad samayn kartaa playlist gaar gabayo aad ugu jeceshahay.
App wuxuu kuu xirta ugu fiican ee radio, iyadoo tiro balaadhan oo ah saldhigyada ka soo xusho oo ay updates joogto ah wararka madadaalada. Comments ka users waa sida soo socota;
Waxaa la helay in uu noqdo app radio ugu fiican ee ka soo baxay there.Slacker ayaa ku radio online / playlist ugu fiicnaa ee aan usedIt ee sida Lugood u music online la fannaaniinta baahida.
Kala duwan Wide ee saldhigyada music
Taageero go'an iyo updates
Waxay bixisaa ilaa taariikhaha wararka caalamka oo dhan iyo music
Codsiga waa la jaan qaada iPhone iyo iPad. Its rating waa 4.0 soo jeediyay in ay tahay mid ka mid ah codsiyada ugu sareysa ee ay category.
Faa'iidooyinka la isticmaalayo codsigan waa in uu leeyahay version bilaash ah leeyahay oo dhan kala duwan ee saldhigyada music. Si kastaba ha ahaatee, version xorta ah ayaa xayeysiis in hayn karaa kalagoynta.
Download app halkan, https://itunes.apple.com/us/app/slacker-radio/id298307011?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya Slacker Radio
Download app ka link ka bixiyo, soo dajiyo iyo abuurtaan, Allena waa bogga guriga, saldhigyada dooran dooro goob kasta oo ay dhoolacadeynta music ah. Ama, waxaad xitaa abuuri karaan playlist gaar.
Oo Loo Magacaabay codsi ugu fiican ee App Store ee 2012 iyo doorashada editor ee Google play. Songza shaki la'aan waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee codsiyada geeyo music. Halkan waxa qaar ka mid ah dadka isticmaala ay lahayd in la yidhaahdo;
Jeclaada feature taalaa oo aan jeclahay playlist.I ayaa helay fanaaniin badan oo cusub jeclahay in aan Songza.1 Love goobaha kala duwan mahad si aad u hesho music wax kasta oo niyadda aan joogo.
No dhagaysiga xadka
Share on shabakadaha bulshada.
Waxaa la socon kara macruufka iyo Android. Waxaa lagu qiimeeyaa 4.3 soo jeediyay in kaalinta ugu sareysa.
Faa'iidooyinka isticmaalay waxaa ka mid ah playlists curated u niyadda kasta iyo goob. Si kastaba ha ahaatee, waxaa had iyo jeer waa firfircoon ku saabsan asalka ah ayaa si joogto ah la isticmaalayo batteriga.
Waxaad codsiga halkan kala soo bixi kartaa; macruufka - https://itunes.apple.com/us/app/songza/id453111583?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya Songza
Download codsiga ka links bixiyo, rakibi on qalab aad oo abuurtaan. Bogga guriga, waxaa lagu weydiin doonaa niyadda ah oo markaas ku bilaaban doono ciyaarista muusigga ee la xidhiidha adiga.
Jango waa mid ka mid ah barnaamijyadooda geeyo music free loo jecel yahay in aynu aad shakhsiyeeyo adeeg radio in ciyaara music ugu fiican heesaa aad u jecel yihiin. Dib u eegista macaamiisha Sample waa sida soo socota;
Its geeyo music app ugu fiican si aan u ogaado mid ah in ay si dhab ah FREEThis waa mid ka mid ah idaacada ugu wanaagsan music Apps baxay thereHaha app weyn ee saldhigyada ku sifayn music guud ahaan music dhadhan wanaagsan.
Free, dhegeysiga aan xad lahayn on desktop iyo mobile
Samee idaacadaha caadadii la fanaaniinta aad u jecel
Fine-habayn aad saldhigyada ay ku daray ama mamnuucay fanaaniinta
Saldhigyada on facebook saaxiib Share
Codsiga waa la jaan qaada Android. Waxaa lagu qiimeeyaa 3.8 kaas oo darajo wax yar ka sarreeya celceliska.
Advvantages isticmaalka app tani waa in aad kala dooran karto hoose, dhexe iyo kuwo liita oo tayo sare leh oo fiican u saftay bixinta internet. Si kastaba ha ahaatee, waa kaliya la heli karo Android 2.1 ama cusub oo aysan joojin ciyaaro inta lagu jiro taleefan marka la isticmaalayo telefoonka.
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa app ah, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jangomobile.android
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya Jango
Download codsiga ka link la siiyay, rakibi oo abuurtaan. Bogga guriga waxaad dooran kartaa saldhigga aad rabto in aad u dhagaystaan, ama doorato by sifayn.
Blinkbox waa habka ugu fudud in la ogaado music cusub ee aad u jeclaan doonaa, oo lacag la'aan ah. Comments Sample user waa sida soo socota;
By fog mid ka mid ah barnaamijyadooda music ugu wanaagsan ee lagu iibiyo suuqa android. Kala duwan oo ka mid ah heesaha oo badbaadiyay aad ugu cad cad ee saldhigga u gaar ah: -. Saldhigyada music kufaraxsanahay la music la jecel yahay, sida ugu fiican uga shaqeeyaan Wi-Fi.
Stream iyo soo bixi idaacadood oo lacag la'aan ah u ciyaarin.
Dhis kuu gaar ah xarun raadiye oo heegan ah.
Saldhigyada Share on shabakadaha bulshada.
App waa la jaan qaada qalabka Android. Waxaa lagu qiimeeyaa 4.4 oo halkan kaalinta mid ka mid ah codsiyada sare geeyo music.
Faa'iidooyinka la isticmaalayo app waxaa ka mid awood u leh inay kala soo bixi iyo in ay tahay lacag la'aan. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay leedahay xayaysiisyada laga yaabo in ay kala go'do aad u dhegeysanaya.
Waxaad codsiga halkan kala soo bixi kartaa; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.we7.player
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya Blinkbox
Download codsiga ka link la siiyay. Ku rakib iyo abuurtaan, Allena waa bogga guriga, waxaad ka heli doontaa fursado, guji sahamin saldhigyada in ay doortaan kasta oo aad rabto inuu u ciyaaro ama waxaad riixi kartaa badhanka raadinta si ay u baadhaan heeso badan oo gaar ah.
MOG waa codsi sare ay sabab u tahay in ay malaayiin songs helaan ballaaran oo xataa aad dhegeysan kartaa heeso ka offline. Sample comments ka users waa sida soo socota;
Waxaan Dhegayso karaan si ay wax song Waxaan doonayaa awesomeLove ah oo tayo sare leh durdurro heerka yara 320 Kbps iyo downloadsThis waa adeeg geeyo music ugu fiican halkaas
Talooyin music sax ah la yaabka leh loogu talo galay in ay dhadhan aad
Loo maqli offline
Helitaanka 15 malaayiin songs
Hagaagsan Instant dhexeeya web oo mobile
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa app https://itunes.apple.com/us/app/mog/id372093286?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya MOG
Ku rakib app oo u abuurtaan. Bogga guriga, dooro wax xukumayaan Inay khiyaar u horseedi doonta in playlists ama waxaad ka raadin kartaa heeso gaar ah oo aad u baahan tahay in ay dhagaystaan.
Crore Machine faantaa ah oo haysta inta badan ka hadlay music on blogs, in aad jeebka. Qaar ka mid ah faallada ku saabsan app waa sida soo socota;
tani waa mid ka mid ah barnaamijyadooda music / blog ugu fiicneyd abid createdIt waa goob weyn oo music cusub ay ogaadeen oo ay la socoto hab remixes.Great cabsi badan si aad u hesho music cusub oo loo abuuro playlist gaar u leh.
Latest kuwan raadkaygay
App waa la jaan qaada iPhone iyo iPad. Waxaa lagu qiimeeyaa 4.3 iyo kaalinta mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu sareeya ee ay category.
Faa'iidooyinka isticmaalay waa in aad aragto dambeeyay oo caan ah heesaha si joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa yimaado qiime dhan $3.99.
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa app ah, https://itunes.apple.com/us/app/hype-machine/id414315986?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya Crore Machine
Ku rakib iyo abuurtaan codsiga aad deviceOn page guriga aad kala dooran karto xulashada ay ku jirto,, 'Popular', 'qaybaha' 'Latest', in ay dhagaystaan ​​playlists ah, ama aad kaliya ku sawirnaa sanduuqa raadinta si ay u doortaan wax playlist gaar ah aad rabto.
TuneIn waa uun radio dhabta ah, halkaas oo aad ka ogaan kartaa, raac, oo maqla tiro balaadhan oo ah music, iyadoo in ka badan 100 000 oo idaacadaha dhabta ah. Halkan waxa qaar ka mid ah dadka isticmaala ay leeyihiin in la yidhaahdo;
Tani waa 'waa in uu helaa' app for radio caashaqi jiray. Waxaan maqli music, maalintii oo dhan meel kasta oo ka adduunka oo dhan. Tani waa ciyaaryahanka ugu podcast / music ugu cabsi badan, waxaan helay
Kala duwan ee Idaacadaha dhabta ah
Kala duwan ee qaybaha
App waa la jaan qaada iPhone iyo iPad. Waxaa lagu qiimeeyaa 4.3 iyo kaalinta sida mid ka mid ah codsiga ugu sarreeya geeyo music.
Faa'iidooyinka la isticmaalayo app this waa ay kala duwan ee saldhigyada music dhabta ah waxaa ka mid ah kuwa deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, waa mid ka mid ah barnaamijyadooda geeyo music ugu qaalisan ee $ 9.99.
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa app ah, https://itunes.apple.com/us/app/tunein-radio-pro/id319295332?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sidee si ay u dhagaystaan ​​geeyo music isticmaalaya TuneIn Radio
Ku rakib iyo abuurtaan codsiga Bogga guriga dooran raadiyaha maxalliga ah ama music, in aynnu dhegaysanno.
> Resource > Music > 10 Best Free Music Streaming Apps